အချိုးကျလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကြောင့် အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ စွဲမက်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့ စတယ်လ်လာရဲ့ အလန်း စား ပုံလေးများ – Shwe Ba
အချိုးကျလွန်းတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကြောင့် အမျိုးသားထုကြီးရဲ့ စွဲမက်ခြင်းကိုခံနေရတဲ့ စတယ်လ်လာရဲ့ အလန်း စား ပုံလေးများ
By Shwe BaPosted on February 18, 2021 February 18, 2021
သွယ် လျ တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ် လေး ကို ပိုင်ဆိုင် ထား တဲ့ တက်သစ် စ ဆက်ဆီ မော်ဒယ်လ် စတာလာ ကို သိ ကြ မယ် ထင်ပါ တယ်..။ ဆွဲမက်ဖွယ် ရင်သပ် ရှု မော စရာ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေနဲ့ ပုရိသတွေ ရဲ့ ရင်ကို ဆွဲဆောင် ညို့ယူ ထား တဲ့ အလန်းစား မော်ဒယ် သရုပ်ဆောင် လေးဖြစ် ပါ တယ်..။ သွယ်လျ ပြေပြစ် တဲ့ ခန္ဓာ ကိုယ် နဲ့ အတူ လှပကြည်လင် တဲ့ အသားအရေ ကိုပါ ပိုင်ဆိုင် ထားပြီး ဆက်ဆီ ကျတဲ့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့အား ပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင် နိုင် သူလေး လည်း ဖြစ် ပါ တယ် … .
သူ မ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ် နဲ့ ဆက် ဆီ ကျကျ ဗီဒီယို လေးတွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် ဖေ့ဘွတ် ပေါ် တွင် အများဆုံး တင်လေ့ ရှိတာ လည်း တွေ့ရ ပါ တယ်..။ လတ်တ လော မှာ တော့ သူမ ရဲ့ အမိုက်စား အလှ တရား တွေနဲ့ ညို့ယူ ဖမ်းစား ထား တဲ့ အလန်းစား ပုံ လေး ကို ဖော်ပြထားတာတွေ့ရ ပါ တယ်..။ ပုံလေး ဟာ ကြည့်ရှု သူတွေ များ ပြား ခဲ့ တာ ဖြစ် ပြီး ပုရိသ တွေ အများ ဆုံး ဝန်းရံခြင်း ခံနေ ရ တာလည်း ဖြစ် ပါ တယ် … .
ယခု အခါ မှာ တော့ စတယ်လာ တစ်ယောက် ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ နဲ့ ဆက်ဆီ ကျကျ ရေကူး ကန်ထဲ မှာ ရိုက် ထား တဲ့ ပုံတွေ ကို တင်ပေး လာ တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်..။ သူမ ရဲ့ အမိုက် စား ခန္ဓာကိုယ် အလှ ကတော့ မြင်သူ တိုင်း ငေး လောက် အောင်ကို ညို့ယူ ဖမ်းစား နေတာ အမှန်ပဲ ဖြစ် ပါတယ်..။ ချစ်ပရိသတ် ကြီး လည်း စတယ်လာ ရဲ့ အမိုက် စား ဗီဒီယို လေးကို ကြည့်ရှု နိုင် စေရန် ဖော် ပြ ပေး လိုက်ပါ တယ် နော် … .
သြယ္ လ် တဲ့ အမိုက္စား ခႏၶာကိုယ္ ေလး ကို ပိုင္ဆိုင္ ထား တဲ့ တက္သစ္ စ ဆက္ဆီ ေမာ္ဒယ္လ္ စတာလာ ကို သိ ၾက မယ္ ထင္ပါ တယ္..။ ဆြဲမက္ဖြယ္ ရင္သပ္ ရႈ ေမာ စရာ အမိုက္စား ပုံရိပ္ေလး ေတြနဲ႔ ပုရိသေတြ ရဲ့ ရင္ကို ဆြဲေဆာင္ ညိဳ႕ယူ ထား တဲ့ အလန္းစား ေမာ္ဒယ္ သ႐ုပ္ေဆာင္ ေလးျဖစ္ ပါ တယ္..။ သြယ္လ် ေျပျပစ္ တဲ့ ခႏၶာ ကိုယ္ နဲ႔ အတူ လွပၾကည္လင္ တဲ့ အသားအေရ ကိုပါ ပိုင္ဆိုင္ ထားၿပီး ဆက္ဆီ က်တဲ့ သူမ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံေတြ နဲ႔ ညိဳ႕အား ျပင္းျပင္း ဆြဲေဆာင္ နိုင္ သူေလး လည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
သူ မ ရဲ့ အမိုက္စား ပုံရိပ္ နဲ႔ ဆက္ ဆီ က်က် ဗီဒီယို ေလးေတြ ကို လူမႈ ကြန္ယက္ ေဖ့ဘြတ္ ေပၚ တြင္ အမ်ားဆုံး တင္ေလ့ ရွိတာ လည္း ေတြ႕ရ ပါ တယ္..။ လတ္တ ေလာ မွာ ေတာ့ သူမ ရဲ့ အမိုက္စား အလွ တရား ေတြနဲ႔ ညိဳ႕ယူ ဖမ္းစား ထား တဲ့ အလန္းစား ပုံ ေလး ကို ေဖာ္ျပထားတာေတြ႕ရ ပါ တယ္..။ ပုံေလး ဟာ ၾကည့္ရႈ သူေတြ မ်ား ျပား ခဲ့ တာ ျဖစ္ ၿပီး ပုရိသ ေတြ အမ်ား ဆုံး ဝန္းရံျခင္း ခံေန ရ တာလည္း ျဖစ္ ပါ တယ္ … .
ယခု အခါ မွာ ေတာ့ စတယ္လာ တစ္ေယာက္ ဆြဲေဆာင္ မႈ ရွိရွိ နဲ႔ ဆက္ဆီ က်က် ေရကူး ကန္ထဲ မွာ ရိုက္ ထား တဲ့ ပုံေတြ ကို တင္ေပး လာ တာပဲ ျဖစ္ပါ တယ္..။ သူမ ရဲ့ အမိုက္ စား ခႏၶာကိုယ္ အလွ ကေတာ့ ျမင္သူ တိုင္း ေငး ေလာက္ ေအာင္ကို ညိဳ႕ယူ ဖမ္းစား ေနတာ အမွန္ပဲ ျဖစ္ ပါတယ္..။ ခ်စ္ပရိသတ္ ႀကီး လည္း စတယ္လာ ရဲ့ အမိုက္ စား ဗီဒီယို ေလးကို ၾကည့္ရႈ နိုင္ ေစရန္ ေဖာ္ ၿပ ေပး လိုက္ပါ တယ္ ေနာ္ … .
Previous post အမျိုးသား ထုကြီးရဲ့ နှလုံးသား တွေ တဖြုတ်ဖြုတ် ကြွေဆင်းသွားအောင် ဆက်ဆီပို့စ်လေးတွေနဲ့ စွဲဆောင်ပြလိုက်ပြန်တဲ့ မော်ဒယ်လ် ချောကလျာ
Next post လှပလွန်းတဲ့ ကိုယ်လုံးလေးကိုပေါ်လွင်အောင် စတိုင်အပြည့်နဲ့ အလှပြလိုက်တဲ့ Mဆိုင်းလု